Ihe 9 ị ga-amata tupu e were ihe mkpuchi anụ ahụ agbanye ihu gị
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ihe 9 ị ga-amata tupu e were ihe mkpuchi anụ ahụ agbanye ihu gị
N'ajụjụ ọnụ na nso nso a Dr. Dan Xu, Chief Physician of Toronto ID Cosmetic Clinic, ekpughere akụkọ dị ịtụnanya n'azụ ụlọ ọrụ aesthetic. O gosiri ka Dr. Xu si na-agwọ ndị ọrịa ya.
Dr. Xu kesara ụfọdụ ihe nzuzo n'azụ ọgwụgwọ a ma ama, Dermal Fillers. Ihe Dr. Xu kpughere banyere ndị na-ahụ maka anụ ahụ kọwara ọtụtụ ngwaahịa dị na otu esi achọ atụmatụ ọgwụgwọ n'enweghị nsogbu, nke ga-enye nsonaazụ na-eju afọ.
Ụlọ ọrụ ịma mma na-aga n'ihu mgbe niile, na ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-etolite etolite ghọọ otu n'ime usoro ịchọ mma kachasị ewu ewu. Otú ọ dị, tupu itinye aka na hype, ebe a bụ ihe 9 ị ga-ama maka ihe ndị na-emepụta ọgwụ injectable.
Kpọtụrụ dọkịta, ọ bụghị onye Selfie
Ọtụtụ ndị mmadụ na-anwale selfies dijitalụ iji tụọ ka ha ga-esi ele usoro a anya. Agbanyeghị, selfies dijitalụ nwere ike ọ gaghị anọchi anya ka ndị na-ejuputa ga-adị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị iche iche nwere ike imetụta ka nsonaazụ ya pụta.
Ọgwụgwọ na-adịghị agbanwe agbanwe
Biko chere ugboro abụọ tupu ị na-eji ihe ndochi akpụkpọ anụ na-enweghị ike ịtụgharị. Enweghị ike iwepụ ihe ndochi ndị a ma ọ bụrụ na nsonaazụ abụghị ihe a tụrụ anya ya. Nhọrọ kacha mma ga-abụ ọgwụgwọ hyaluronic acid nke enwere ike ịtụgharị, na-enye nnwere onwe ịnwale ọdịdị ọhụrụ na ikpebi ihe kacha mma.
Nsonaazụ dabere na Dọkịta
N'agbanyeghị ụdị ihe ndochi nke dọkịta na-eji, nsonaazụ na-adabere n'otú dọkịta ahụ si ebelata ihe ize ndụ, ebe ọ na-enye nsonaazụ injection kacha mma. Ndị dọkịta kacha mma ga-enwe afọ ahụmahụ injection ịchọ mma, yana echiche dị mma pụrụ iche.
Ihe ndochi nwere ike ọ gaghị emepụta nkwalite n'ozuzu ya na ọdịdị ahụ. Ọ dị mkpa icheta na mgbe ịmalite ọgwụgwọ, a ghaghị ịtụle ihe mgbaru ọsọ nkwalite n'ozuzu ya, na site na ha a na-emepụta atụmatụ nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Ejila naanị Filler ọ bụla
Anwala naanị ụdị ndocha ọhụrụ ozugbo. Gbaa mbọ hụ na ị gakwuru naanị ọkachamara nwere ikike. Jụọ ajụjụ gbasara ngwaahịa ndị ahụ wee mụta maka uru yana ogologo oge anwalela ngwaahịa a na ụlọ ọrụ ịchọ mma.
Atụkwasịla obi n'ihu ọha
Ụdị ihe ndochi ochie, anwalela nke ọma nwere ike ọ gaghị akwalite ya dị ka ndị na-ejuputa ọhụrụ, n'ihi na enwere ike inwe uru azụmahịa karịa n'azụ ihe ndochi ọhụrụ a. Gbaa mbọ hụ na ị gakwuru onye ọkachamara nwere ikike iji nyochaa ụdị ọhụụ ọ bụla.
Hyaluronic acid bụ ihe kacha mma na-agbanwe agbanwe
Maka nsonaazụ kacha mma na-agbanwe agbanwe, họrọ hyaluronic acid filler dị ka Juvederm, Belotero ma ọ bụ Restylane wdg.
Jiri ihe ndozi akwadoro
Health Canada akwadola ọtụtụ ụdị ihe ndochi dị mma maka ihu, egbugbere ọnụ na aka: hyaluronic acid, calcium hydroxyapatite, poly-L-lactic acid, na polymethylmethacrylate. Ọzọkwa, ụfọdụ ihe mkpuchi nwa oge akpọsara nwere ike nweta nsonaazụ na-adịgide adịgide na-achọsi ike, nke pụtara na ọ dịghị mkpa ịgbanye ọgwụ ugboro ugboro.
Ọgwụgwọ kwesịrị ịbụ nkwa akwadoburu
Mara ihe mgbaru ọsọ mgbe niile, tupu ịbanye n'ahịa ihe ịchọ mma. Ịmara ihe mgbaru ọsọ ịchọ mma na ịchọ mma mgbe gị na dọkịta na-ekwurịta okwu bụ nzọụkwụ mbụ dị mkpa. Mgbe ahụ, ịgbaso usoro ndị a na-emebu, n'oge oge, dị mkpa iji nweta nsonaazụ achọrọ.
Gbaa mbọ hụ na ndị ọkachamara na ndị dọkịta nwere ikikere gbabara ihe ndozi derma. Nke a na-eme ka o doo anya na ịnweta nlekọta dị nchebe yana nsonaazụ kacha mma.
Onye ọrịa mbụ debanyere aha na ọmụmụ ụlọ ọgwụ gbasara akwara
Chorus Aviation emechaala azụta Falko...
Line Carnival Cruise Line na-agbaji n'ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ...
Njem gaa Hawaii: Mmelite dị mkpa
Hawaiian Air maliteghachiri ọrụ Oakland-Kona, gbakwụnye ọhụrụ ...